Waxyaabaha aadan jeclaan doonin oo ku saabsan waraaqaha dhakhaatiirta Fiisigiska iyo waxyaabaha aad jeceshahay - Hagaajinta Caafimaadkaaga - WAA KU SAABSAN SAAMAYNTA
ACCUEIL » rasiidhada Waxyaabaha aadan jeclaan doonin oo ku saabsan waraaqaha Fiisikiska iyo waxyaabaha aad jeceshahay - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Waxyaabaha aadan jeclaan doonin oo ku saabsan waraaqaha Fiisikiska iyo waxyaabaha aad jeceshahay - Hagaajinta Caafimaadkaaga
TELES RELAY 12 August 2019
Waxaad sidoo kale jeclaan doontaa inaad ka soo muuqato dhowr ka mid ah shaqadiisa kale ee quruxda badan ee la xiriirta kimistariga. Inta badan aragtiyaha fiisigiska waxay adeegsadaan xisaabta si ay ula wadaagaan mabaadi'dooda. Chartered Physicist (CPhys) Diiwaan galinta khabiirkan waxaa loogu talagalay dhammaan kuwa ku takhasusay jimicsiga jimicsiga oo leh awood ballaadhan oo lagu qaban karo heer mas'uul ah.
Shaashadu waa sax isku midab ah oo isku midab ah. Waxaad filan kartaa isbeddel midab leh oo ah hooska 2-3. In lagu qurxiyo waraaqaha boostada waa hab fudud oo sahlan oo lagu cusboonaysiin karo gurigaaga loona abuuro jawi deggan.
Qaar ka mid ah biraha geeska ah ayaa hadda muuqda. Cuntada waxaa ka mid ahaa tamarta kiimikada ee jirku u isticmaalo shidaal ahaan. http://namethatclaim.com/uncommon-article-gives-you-the-facts-on-pictures-of-science-that-only-a-few-people-know-exist/ Xawaaraha ayaa isbedelaya waqtiga waqtiga.
Fursadaha Boosta Fisigiska
Tallaabada ugu horeysa waa sawirka. Waa suurtagal in laga soo dejiyo noocyo kala duwan oo miis ah boggooda. In kasta oo la mid ah, miisaska 2 ayaa loo habeeyay.
Marka shaygu uusan beddelin xawaaraha, markaa sheygu ma soo dedejinayo. Kiiska halka ay ku fadhido xaylka ayaa sida ugu wanaagsan loogu yaqaanaa Faragelinta Dhismaha ah. Hirarka-dhuuban ee gacmeedku ma sii wadi karaan wareegga meeraha.
Kaliya waxay ku siin doontaa dhinaca 1 ee sheekada. Sidoo kale, aadanuhu waxaa laga yaabaa inaanay joogin meel ay ku yaraadaan. Waxa ugu xun ee ku saabsan mabaadiidaas http://www.oscareximp.com/what-the-in-crowd-wont-tell-you-about-science-hub/ waxaa wali loo isticmaalaa shakhsiyaadka qarnigii 21st.
Hadafkayagu waa inaanu kuu noqono xalkaaga habka ugu fudud uguna hufan ee dunida u sii soconaya. Ujeeddada ayaa ah in la helo dhammaan macluumaadka ku saabsan shaqadooda. Wuxuu qabtay jagadan inta noloshiisa ka hartay.
Qoraalku uma baahna in la soo bandhigo. Waveerka ayaa loo heli karaa qaabab badan. Ameerika, waraaqaha wax lagu dhejiyo ayaa soo maray horumar waxyar ka duwan.
Dhamaadka waraaqaha Fiisigiska
Sida ugu fudud ee lagu heli karo ilaha LEARN NC waa in lagu bilaabaa URL gaar ah oo maskaxda lagu hayo. Waad dooran kartaa inaad la xiriirto Waaxda Shaqaalaha ee Gobolka si aad u hesho macluumaad ku saabsan shuruudaha gobolkaaga. Ka eeg websaydhka 'CAC' wixii macluumaad dheeri ah.
Nuqyada waraaqaha Fiisigiska
Shaqada la taaban karo waa qeyb muhiim ka ah waxbarashada sayniska, laakiin waa mid wax ku ool ah, waxaan rabnaa inaan go’aansanno cidda aan rabno inaan ka baranno, oo aan eegno dariiqa ugu habboon ee lagu gaari karo taas. Si aad si fiican u fahamsan u hesho sida ay arimahani ugu habboon yihiin sawirka weyn ee dhaqaalaha, fiiri tartamadan xagga dhaqaalaha.
Neurobiology aad uma badna in tan la sameeyo. Ardayda jimicsiga waxay leeyihiin noocyo badan oo xirfado shaqo kadib kuliyada. Ardayda qalin jebisa iyo kuliyadaha qeybaha kala duwan ee tacliinta ayaa ka qeyb qaata howlaha cilmi baarista.
Haddii aad fiirisay inta aad daawaneyso, waxaad fiirineysaa sida qaalibka ah xitaa hal sawir oo qaali ah. Si fudud u dooro oo la wadaag shabakadaha bulshada ee aad jeceshahay inaad kudarto boostadaada. Mar haddii boosteejooyinka boostada la soo celiyo, weligood waa la beddelaa.
Adeegsiga farshaxanada garaafyada ayaa bilaabay inay saameyn ku yeeshaan sawirka. Tusaale ahaan, waad ku daabacan kartaa xayeysiiska internetka ee qaabka sawirku ku dhejiyeysto intaad abuuri karto boodhadh dhejis ah oo aad nuqul ka heli karto shaxdiisa qaab-ka-diyaarsan ee waraaq-waraaqaha. Muuqaal cajiib ah ayaa u muuqda mid fudud oo aan qashin-qarin.
Bayaanka rasmiga ah ee NSTA booska ku saabsan waajibaadka la wadaago ee joogtaynta jawi waxbarasho badbaado leh. Natiijo ahaan, sawirku waa been-abuur, khiyaano, iyo sharaf-darro. Intaas waxaa sii dheer, noocyada soo bandhigaya waxaa loo qaddarin karaa iyada oo loo tixraacayo xaqiiqada ah in aysan si aad ah ula soconin qaybta daryeelka palliative.
Sida milkiileyaasha ganacsiyada yaryar badan, waxaa laga yaabaa inaad dhowr sano ka weynaato xubin ka mid ah kooxda xayeysiintaada. Kooxdayada uqalma iyo horumarinta xirfadeed ee xirfad-yaqaanka horumarinta khaaska ah fikrado fool-ka-fool ah iyo macluumaad si ay kaaga caawiyaan dhinac walba ee maareynta meheraddaada. Fadlan hubso inaad ku dartid magaca oo dhan ee galaya ardayga haddii aadan ka mid ahayn urur.
Fiiriyeyaasha Fisigiska Fiiri
Si taxaddar leh uga baxsiga macluumaadka muhiimka ah waxay abuuri kartaa muhiim waana ay adkaan doontaa in la ogaado. Ogeysiisyada qaar waa la dhajiyay waana la arki karaa labadaba. Waa in laga diiwaangaliyaa sahanka onlaynka ah si ay ugu qalmaan inay helaan abaalmarin.
Kahor intaadan gadan wax iibsigaaga, waxaad ubaahan kartaa inaad fiiriso dukumiintiyadayada si aad u ogaato haddii aan ku bixinayno wax heshiisyo ah daabacaado bilaash ah. Qiimaha dhoofinta laguma daro sicir-dhimista. Kufilan oo kaliya xulashada la iibsaday.
Xulashooyinka Boostayaasha Fiisigiska Sare
Waxaa jira waxyaabo badan oo kala duwan oo qulqulaya kuwaas oo sababa sawir. Haddaad raadineyso boorar qaas ah, wac kooxda daabacada loo sameeyay oo xulashooyinkayaga badan ka mid ah. Cabirka bogga ayaa leh cabirka daabacaadda aad ugu jeceshahay.
Xogta ayaa la qaboojin doonaa usbuucii hal mar. Ujeeddadaadu waa inaad abuurto qorshe-hawleed kugu hagi doona cilmi-baaristaada bilow ilaa dhamaad. Xulo sawir si aad u aragto nooc ka sii weyn.
Fikradaha Dhejiska Fisigiska
Waxa ku xiga ee la sameeyo waa in la bilaabo qorista. Arrinta ugu caansan waa in la soo gaabiyo. Waa su'aasha ugu fudud ee looga jawaabayo.
Boorarka la dhejiyay ee dib loo soo celiyay ayaa lagu soo celin karaa qaabkoodii hore. Markaas waad sameyn kartaa! Markaad geyso wax iibsigaaga, waxaad heli doontaa taariikhda la soo qiyaasey, taas oo caadi ahaan adiga kuu noqon doonta.
Boostada waa tayo caadi ah oo fasalada adduunka oo dhan ah. Waxaa sidoo kale loo diri karaa dhaqaale ahaan iyo sida saxda ah markay tahay. Xitaa dhajiyayaasha isdhaafsiga ayaa bixiya fursad ay kula macaamilaan macaamiisha.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/things-you-wont-like-about-physics-posters-and-things-you-will/
Faahfaahinta Waa maxay Pka Chemistry-ga Ma jiro Cid Ka Doodeysa - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Maraq Garlic: 3 cuntada guriga lagu kariyo ee si fudud loo diyaariyo - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Hindiya: Ganaaxyo culus oo loo geysto dembiyada wadooyinka laga soo bilaabo 1er Sebtember: Gadkari | Wararka Hindiya
Gamescom 2019: Empire of Sin, Mafiosos ayaa ku yaal meesha
20h RTL 21 Agoosto 2019 - VIDEO
"Shiine "ka Bonoua wuxuu ammaaney DJ Arafat ...
DADKA & LIFESTYLE3,158
Daawooyinka dabiiciga ah22
DIB U EEGID AFRICAN PRESS109
TECH & TELECOM1,569
Video dheeraad ah1,332